Njeri Rionge, haweeneyda keentey internetka saboolka - Afrikhepri Fondation
maalin-jimce, Julaay 28, 2021
Njeri Rionge, oo ah haweeneyda internetka u keentay masaakiinta
Akhrinta: 2 daqiiqo
Horeba 2011, magazine US Forbes ah, sheekada guusha ku takhasusay, qaatay qoraal taxane-taariikheed a naagtan caadi ahayn, "hoggaamiyaha ganacsiga ayaa ugu guulaha badan Africa."
Sheekada Njeri Rionge wuxuu bilaabmaa marka la eego sanadka 2000 marka ay go'aansato inay soo saarto Wananchi.com, bixiyaha adeegga internetka. Kacaan-daro ka jirta Kenya, oo ah waddan hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ah oo aan rabin inay bartaan qalabka dijital ah.
"Iyadu, fududeynta helitaanka macluumaadka ee internetka waxay ahayd waddo lagu soo koobo farqiga u dhexeeya aqoonyahannada aqoonta leh ee Bariga Afrika iyo dadka intiisa kale", Maanta, iyada Shirkadda ayaa hadda ah tan ugu weyn ee bixisa adeegga internetka dhammaan Bariga Afrika waxaana ku qoran $ 173 milyan.
Sanadihii 46, haweeneydani ganacsigeeda wali ma aysan helin qibrad xirfadeed waxayna ku guulaysatay guusha. Ka hor intaanan galin isgaadhsiinta, waxay u shaqeysay sida timo-jaraha ama iibiye ku yaal dukaanka dharka ee London.
Tan iyo markii laga saaray Wananchi.com, Njeri Rionge ma joojin. In ka badan sanado 10, waxay abuurtay shirkad latalin maamul ah, Ignite, mid kale oo ku saabsan tiknoolajiyada cusub, Insight. Kuwani waa tusaalooyin kaliya oo taxane ah.
Wareysiga sheeyada ee Forbes waxay sharaxeysaa:
"Waxaan abuurayaa ganacsiyo adag sababtoo ah waxaan ku qanacsanahay in Africa ay tahay xuddun dhaqaale oo soo socota waxaanan u baahanahay inaan dhisno ururrada maxalliga ah ee taageera kobaca."
Mashruucii ugu jeclaa isaga hadda? Laalaabka Ganacsiga. Horumarinta si ay u caawiso hindiseyaal hagaagsan ayaa bilaabay, kori doona oo horumarinaya fikradahooda.
Njeri Rionge waxa uu doonayaa inuu dadka kale u oggolaado inay raacaan tusaaladiisa oo ay noqdaan ilaha waxyiga.
Sida adduunka, adduunka cusub ee teknoolojiyada cusub, waxay hadda la kulantaa dhowr arrimood oo ku saabsan sidii loo heli lahaa shaqaale tayo u leh shaqada noocan ah.
“Caqabada ugu weyn maanta waa ilaha aadanaha,” ayay sharraxday.
Caqabad cusub oo loogu talogalay ganacsade this dhalatay.
Masaaridii hore, Maxaabiista waxaa loogu yeeri jiray "skr-cnh" oo macnaheedu yahay "maxbuus"
Ka Gudubka Nacaybka - Zirignon Grobli
Daawo Selma (2014)
Miisaska sumadda ee Thot l'Atlante (Audio)